Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Boeing sy Airbus dia niahiahy momba ny fiaraha-miombon'antoka Rosia sy ny Shinoa Comac ary fiaramanidina mpandeha 330
Comac, orinasa indostrialy sinoa- rosiana hiara-manamboatra fiaramanidina mpandeha miaraka amina seza 310, afaka manidina hatramin'ny 12,000 kilometatra, ary antenaina halefa afaka 10 taona.
Shina no hamolavola sy hanamboatra ny fiaramanidin'ny C929, raha i Russia kosa dia hamolavola ny elatry ny fiaramanidina mpandeha malalaka, izay eo an-dalam-pamolavolana ankehitriny, hoy ny Commercial Aircraft Corp any China ny zoma teo.
Fantatra kokoa amin'ny anarana hoe COMAC, ilay mpanamboatra fiaramanidina sinoa, izay hanangana ilay fiaramanidina vaovao miaraka amin'ny United Aircraft Corp an'ny Russia, dia namoaka antsipirihany vaovao maro momba ny tetikasa roa tonta ao amin'ny Aviation Expo China 2017 any Beijing.
Na dia any Russia aza ny ivon-drafitra lehibe, dia hanana birao famolavolana azy ihany koa i Shanghai.
Nilaza ny COMAC fa ny C929 dia novolavolain'i China-Russia Commercial Aircraft International Co Ltd, orinasa iraisana.
Shina sy i Russia dia samy handray ny antsasaky ny asa, ary handefa ny mpiasa forongony ho fitsidihana fifanakalozana amin'ny fotoana tsy voalamina, hoy ny COMAC.
Ny 51 isan-jaton'ny fiaramanidina dia ho vita amin'ny akora mitambatra, izay antenaina hahatonga ny C929 ho ara-toekarena sy mahomby.
Ilay jet dia mety hanana layout mety hipetrahana efatra: seza 280 amin'ny kilasy telo; Seza 291 amin'ny kilasy roa; Seza 310 amin'ny kilasy telo tery; na seza 416 amin'ny sokajy toekarena rehetra, hoy i Chen Yingchun, mpamorona ankapobeny ny C929.
Ny tsena vaovao dia mikendry indrindra an'i Chine, Russia ary ireo tsena hafa any Azia-Pasifika.
Ny maodely mifaninana aminy dia misy ny A330 sy ny A350 an'ny (mpanamboatra fiaramanidina eropeana) Airbus Group ary ny B787 an'ny (mpanamboatra amerikana) Boeing. Mifidy mpamatsy eran'izao tontolo izao izahay.
Isaky ny telo taona dia hifandimby hanome anarana ny filohan'ny fiaraha-miombon'antoka, izay natomboka tamin'ny 22 Mey tany Shanghai, i Shina sy i Russia.
Ny firenena tsirairay avy dia hanana seza efatra amin'ny birao valo an'ny orinasa.
Ny C929 dia tetikasa iray mikendry ny handrava ny duopoly an'i Boeing sy Airbus eo amin'ny tsenan'ny fiaramanidina mpandeha malalaka.
Lin Zhijie, mpandinika indostrian'ny seranam-piaramanidina, ary mpanoratra ao amin'ny Carnoc.com, iray amin'ireo vavahadin-tseranana fiaramanidina sivily lehibe indrindra ao Shina, dia nilaza fa ny fitomboan'ny sidina any Shina amin'ny sidina iraisampirenena, indrindra ireo zotra lavitra, dia mitaky fiaramanidina malalaka.
“Ny indostrian'ny fiaramanidina dia sehatra iray misy tombony an-tsokosoko. Mandany vola be i Shina amin'ny fividianana fiaramanidina midadasika avy any Boeing sy Airbus isan-taona, ”hoy i Lin.
Sina sy Russia no tanjon'ity fiaraha-miombon'antoka ity, miaraka amin'ny vokariny, hanampy betsaka amin'ny fampihenana ny vidin'ny fividianana fiaramanidina izany, ary ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka afaka hampiakatra ny tombom-barotra azony ary hanolotra tapakila mora vidy kokoa ho an'ny mpanjifa. Izy io koa dia handanjalanja ny fitaomana eoropeanina sy amerikana, ny anaran'ny Airbus sy Boeing amin'ny fanaovana ampihimamba ny indostrian'ny fananganana fiaramanidina.
Mandritra izany fotoana izany dia miezaka stratejika i China mba hihazona ny indostrian'ny fizahan-tany iraisam-pirenena amin'ny fanambarana ny Alliance fizahan-tany manerantany tao amin'ny UNWTO General Assembly izay natao tao Chengdu, Sina vao vita.